2014 Zvemukati Kushambadzira Zvinoitika | Martech Zone
2014 Zvemukati Kushambadzira Maitiro
Chishanu, January 10, 2014 Chishanu, January 10, 2014 Douglas Karr
Isu tanga tichigovana mamwe makuru infographics pa 2014 yekushambadzira mafambiro uye iyi kubva kuUberflip haina kumbosiyana - ichipa imwe nzwisiso yekuti zvirimo zviri kuita sei musimboti wekushambadzira pamhepo pamusika. Kunyangwe mukati medu vega agency, isu takachinjisa zviwanikwa takananga kushambadzira zvemukati kune vese vatengi vedu… imwe yenhengo dzedu dzechikwata dzakakosha Jenn Lisak anovandudza zvemukati marongero evatengi vedu.
Uberflip munguva pfupi yapfuura vakatora infographic kutarisa kwakanyanya kushambadzira kweye 2013 uye ikozvino ivo vari kutarisira kumberi kune ramangwana! Kwemakore, kushambadzira zvemukati zvakabva zvakanaka-kuva-nazvo to anofanira-kuva maererano nemaitiro 'emakambani ekushambadzira. Saka chii chinobata 2014 yenzvimbo ino inokurumidza kubuda?
Zvitadzo Zvinomwe Zvinouraya zveSMS Kushambadzira
Ane Masocial Media Asvika paRuzivo rwekuvandudza?